Inkqubo yeeValves zamanzi zamanzi, abaXhobisi - Abavelisi beeNkqubo zeeNkqubo zamanzi base China
1318 Ingcinezelo yokunciphisa uxinzelelo
Ukubalula Ukunciphisa ivalve: kunciphisa uxinzelelo owongozelelweyo wokungena kuxinzelelo lwentengiso esezantsi. Uxinzelelo oluphuma rhoqo kububanzi bokuhamba. I-valve eyintloko eqhutywa ngumqhubi ayixhomekekanga kuxinzelelo. Uxinzelelo lwe-Outlet luhlengahlengiswa ngesikere esijijwayo. Ingagcinwa ngaphandle kokususwa kumgca wombhobho. Isantya sokuvula / sokuphendula esifanelekileyo. Umgaqo ozinzileyo ekuhambeni kwe-zero. Esisangqa kunye kusombiwa iyahambisana EN1092-2 PN10 / 16; ANSIB16.1 Iklasi125. Isiphelo esine-grooved siyahambelana ne-AWWA ...
2108 AWWA C504 C516 Kabini Eccentric Butterfly Valve
Amaziko ethu anezixhobo ezifanelekileyo kunye nolawulo olukhethekileyo kumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala esizukulwane asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka komthengi opheleleyo nge-2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Zonke iimveliso ziza nomgangatho olungileyo kunye neenkonzo ezigqibeleleyo emva kokuthengisa. Ukujolisa kwintengiso kunye nokujolisa kubathengi yile nto besikade siyiyo emva. Ndijonge ngokunyanisekileyo kwintsebenziswano ye-Win-Win! Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukhethekileyo lomgangatho ophezulu kuwo onke amabakala e ...
I-GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS eyomeleleyo ehleliwe esangweni leValve nge-Extension Spindle
Ukucaciswa kwe-GD1: 150≤H1≤1000, GD2: H1≥1000. Umgama ukusuka kumgca osembindini wevalufa emhlabeni kuya kubonelelwa ngumthengi. Xa unikezela ngedatha, nceda uqiniseke ukuba impazamo mayingagqithi kwi-20mm. Ukuxhotyiswa nge-T-wrench: Iiseti ezili-10 zeesilinganisi zesango elifanayo zixhotyiswe nge-T-wrench enye. Abathengi kufuneka bathenge esi sitshixo ukuba bafuna ngaphezulu. Le ivelufa yesango ingcwatyelwe ngqo ine-BS 5163 eyomeleleyo ehleli esangweni ivelufa okanye i-FM / UL NRS ehleliyo ihleli ...
Ukubonelela kubonelela ngemisebenzi yokuKhutshwa komoya kunye neeValthi zoMoya / zoMoya. Ukukhuphela ngaphandle isixa esikhulu somoya kwinkqubo yokuqalisa. Inika ukhuselo ekuweni kombhobho ngenxa yomphunga. Vent ivolumu encinci yomoya eqokelelweyo ngexesha lokusebenza kwesiqhelo. I-NPT okanye i-Metric intambo yokungena. Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° C. Umhlwa woKhuselo lweFusion yokunxiba ebotshiweyo okanye ulwelo lwe-epoxy olungaphakathi kunye nangaphandle. Ukucaciswa kweMathiriyali Bo ...
I-9708 yeValve yoNcedo loMoya enye
Ukubonelela kubonelela ngemisebenzi yokuKhutshwa komoya kunye neeValthi zoMoya / zoMoya. Ukukhuphela ngaphandle isixa esikhulu somoya kwinkqubo yokuqalisa. Inika ukhuselo ekuweni kombhobho ngenxa yomphunga. Idibanisa zombini amanqaku ngaphakathi kwethole elinye, icompact ngakumbi kwaye inezoqoqosho. I-NPT okanye i-Metric intambo yokungena. Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° C. Umhlwa woKhuseleko lweFusion ukuqinisa ukutyabeka okanye ulwelo lwe-epoxy yangaphakathi kunye ne-exteri ...
9701 oluzenzekelayo Valve Vent Valve
Ukucaciswa kwe-orifice encinci ye-1/16 kwi. (1.6mm) ukukhupha umoya phantsi koxinzelelo ngexesha lokusebenza kombhobho oqhelekileyo. Ukudada kuqhagamshelwe kumoya ngokusebenzisa indlela yokunxibelelana ekwaziyo ukusebenza komoya phantsi koxinzelelo olupheleleyo lombhobho. I-NPT okanye i-Metric intambo yokungena. I-WRAS yamkelwe. Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° C. Umhlwa woKhuselo lweFusion yokunxiba ebotshiweyo okanye ulwelo lwe-epoxy olungaphakathi kunye nangaphandle. ...
9208 oluzenzekelayo Valve Air
Ukubalula i-9208 yivalve yomoya esebenza ngokuzenzekelayo. Isihlalo somelele sinika i-100% itywina elithembekileyo. Uyilo lwegumbi elinye lubonelela ngokusebenza okungcono kunoyilo lwegumbi eliphindwe kabini. Ukungena kunye nesantya sokukhupha kunokufikelela kwisantya sesandi. Uyilo lugged ngokulula umhlwa insimbi engatyiwa engatyiwa. Umsesane wokutywina we-EPDM. Flanged kunye nokomba kuyahambelana ne-EN 1092-2 PN16 (Ezinye iintlobo ziyafumaneka ngesicelo). Ukuphuma kwintambo yomfazi acc. Ukuya kwi-DIN ISO 228. ...
Ukucaciswa kwegumbi elinye le-orifice ephindwe kabini yomsebenzi womoya kunye ne-vacuum yokukhupha ngokuzenzekelayo. Yenzelwe ukusebenza kunye nolwelo oluphethe amasuntswana aqinileyo afana nogutyulo kunye namanzi amdaka. Ukukhupha umoya ngexesha lokutshaja kwenkqubo kunye nokungenisa umoya ngexesha lokutsala kwenkqubo. Gcwalisa ukwahlula ulwelo kwindlela yokutywina kubonelela ngeemeko zomsebenzi ezifanelekileyo. Zonke iinxalenye zesinyithi zangaphakathi ezenziwe ngentsimbi engenasici. Esisangqa kunye kusombiwa iyahambisana EN1092-2 PN16 (Ezinye iintlobo ar ...
I-9101A i-Valve yokuNceda uMoya oyiNtloko
Ukucaciswa kukhutshwe umoya ophuma kabini umoya ovuthayo kwimilinganiselo encinci yomoya ngexesha lokusebenza kwesiqhelo. Vumela ukungena kwemithamo emikhulu yomoya ngexesha lokutsalwa kombhobho. Vumela ukuphuma kwemithamo emikhulu yomoya ngexesha lokugcwaliswa kombhobho. Nika ukhuseleko ekuweni kombhobho ngenxa yokutsalwa. Flange kunye nokomba kuyahambelana ne-EN 1092-2 PN16 (Ezinye iintlobo ziyafumaneka ngesicelo). Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° CC ..
I-9100 yeValve yokuNcedisa uMoya oyiNye
Ukubonelela kubonelela ngemisebenzi yokuKhutshwa komoya kunye neeValve zoMoya oMoya. Ukukhuphela ngaphandle isixa esikhulu somoya kwinkqubo yokuqalisa. Inika ukhuselo ekuweni kombhobho ngenxa yomphunga. Idibanisa zombini izinto ngaphakathi kwivelufa enye, icwecwe ngakumbi kwaye iyonga. Esisangqa kunye ukubhola ukuya EN1092-2 PN10 / 16; I-ANSI B16.1 iklasi125. Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° C. Umhlwa Protection Fusion ngeso lenyama okanye ep elulwelo ...
Iimpawu zeValves zithobela i-DIN3356. Isitulo sentsimbi. Isiqu esitshintshiweyo. Ukupakisha endaweni yento phantsi koxinzelelo. Iyafumaneka ngeeflanges EN1092-2 2 PN10 okanye PN16, ANSI B16.1 Class 125. (Ezinye iintlobo ziyafumaneka ngesicelo) Ubuso ngobuso ngobuso ngokungqinelana ne-DIN3202 uthotho F1. Uxinzelelo lokusebenza kunye nobushushu 16bar ikalwe nge -10 ° C ukuya kwi-120 ° C. Ukukhuselwa komhlwa ngaphakathi nangaphandle kwe-epoxy yepeyinti epeyintiweyo.
I-6123 EN13789, i-MSS SP-85 yeGlobe Valve
Iimpawu zeValves zithobela i-EN13789, i-MSS SP-85. Isitulo sensimbi. Isiqu esitshintshiweyo. Ukupakisha endaweni yento phantsi koxinzelelo. Iyafumaneka nge-flanges EN1092-2 PN10 okanye PN16, ANSI B16.1 Class 125. (Ezinye iintlobo ziyafumaneka ngesicelo) Ubuso ngobuso ngobuso ngokuhambelana ne-EN558-1 uthotho olusisiseko lwe-10 kunye ne-ASME B16.10. Khetha i-150 psi ekhoyo. Ukucaciswa kwezinto ezibonakalayo Umzimba ongwevu we-iron iron uBonnet ongwevu we-iron cast I-bronze Disc bronze Disc stem insimbi